Gobolka Novosibirsk - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda Gobolka Novosibirsk
Calaamadda: Gobolka Novosibirsk
Beeralayda gobolka Novosibirsk waxay beeri doonaan baradho iyo kaabash badan
Shirkadaha beeraha ee gobolka ayaa kordhin doona aagagga lagu beeray khudaarta "Borscht set" iyo baradhada sanadka 2022. Qorsheyaal lagu horumarinayo beerashada khudaarta ee gobolka...
70 hektar oo dhul baradho ah ayaa waxaa bixin doona shirkadaha beeraha dadka deggan Novosibirsk.
Afar shirkadood oo beeralay ah oo ka tirsan gobolka Novosibirsk ayaa ka kireyn doona ilaa 70 hektar oo dhul ah dadka deegaanka si ay u beeraan una beeraan baradhada. Ku saabsan ...
Toddobaadka Beeraha Siberian ayaa dhammaaday
In ka badan 200 oo shirkadood iyo magacyo ka socda 35 gobol oo Ruushka ah iyo lix waddan oo adduunka ah, booqdayaasha saddex degmo oo federaal ah - Ural, ...
Todobaadka beeralayda Siberian ayaa ka dhacaya Novosibirsk
Dhacdadan warshadeed ee caanka ah waxay isu keentaa ka qaybgalayaasha suuqa, khubarada, saynisyahano iyo saraakiisha dawladda, iyo sidoo kale tignoolajiyada cusub ee qaybta beeraha. Bandhig...
Toddobaadka Beeralayda Siberian ayaa bilaabmaya
Horeba Noofambar 10 ee Novosibirsk, ee Novosibirsk Expocentre International Exhibition Complex, waxaa bilaabmaya usbuuca beeralayda Siberian. Martida goobta ayaa sugaya waxyaalaha cusub ee xilliga: mishiinada beeraha, qalabka, ...
Toddobaadka Beeralayda ee Siberian ayaa dhici doona taariikhaha loo qoondeeyay: laga bilaabo 10 ilaa 12 Noofambar!
Munaasabadda warshadaha ee caanka ah ayaa kulmi doonta ciyaartoy suuqa, khubaro, saynisyahano iyo saraakiisha dawladda. In ka badan 200 oo shirkadood iyo wakiilo ka socda shirkadaha caanka ah ee adduunka
Sayniska ilaalinta baradhada
Warbixinno dhowr ah oo ka soo baxay shirkii caalamiga ahaa "Genetics, genomics, bioinformatics and plant biotechnology" (PlantGen2021), oo lagu qabtay Novosibirsk, ayaa loo hibeeyay siyaabo cusub ...
Siyaabo cusub oo loo beero dhirta ayaa lagu bartay gobolka Novosibirsk
ZAO Studenovskoye wuxuu ku yaal koonfurta degmada Karasuksky ee gobolka Novosibirsk. Qamadi, miro, shaciir iyo dalagyo saliid ah ayaa halkan lagu beero. Sannadkan beerta markii ugu horreysay ...
Ololaha abuurka ee gobolka Irkutsk wuxuu bilaabmay laba toddobaad kadib
Bartamihii Maajo, beeraleyda 18 degmo oo ka tirsan gobolka Angara waxay bilaabeen inay si aad ah u beero dalagyada miraha iyo bataatiga. Guga qabow Sida ugaasku u sheegay ...